Ngesikhathi kwamakha yesimanje kanye emakethe yezimonyo umkhiqizo omusha - Afrika insipho emnyama. Mangisho ukuthi lesi myltsa brusochek awubalulekile kancane ngakho, uma kuqhathaniswa okugeza ezivamile. Nokho, izindleko zayo okusezingeni eliphezulu kungenxa neqiniso lokuthi uwukwenziwa eziyikhulu amaphesenti zemvelo, izithako organic futhi khiqiza it e-Afrika kuphela. Kukholakala ukuthi okungcono insipho emnyama eyenziwe Ghana. zokupheka yakhe bebaningi kangaka futhi konke labizwa ngokuthi lidlule mylovar wendawo ezizukulwaneni ngezizukulwane. Uma ngabe le insipho yadalwa eYurophu noma e-US, okusho ukuthi liqukethe futhi yizici zamakhemikhali, okuyinto insipho Afrika samanje lapho. Kodwa ngisho imikhiqizo ekhiqizwa kulezi amazwekazi amabili, siyasebenza ngempela, nakuba kungokwemvelo ngokwengxenye.
insipho Afrika yenziwa ngesandla futhi umkhiqizo imvelo. Ngesisekelo zokupheka kakhulu umlotha ukuthi uhlala emva nokushiswa izinhlobo olukhethekile ubhanana, ukhokho pods futhi Shea namantongomane. Futhi kule insipho emnyama kungezwe omisiwe ngokucophelela elangeni futhi ahlikihlwe eyohlobo powder emagxolweni esihlahla esihlahleni shi. Kuyadingeka amafutha eziningana ixubene, isib, cocoa ibhotela, karite (shi), kakhukhunathi. Konke lokhu izidakamizwa ixubene ngesandla usuku lonke, bese mayelana amasonto amabili, "uvuthwe" endaweni emnyama. Ukuthengiswa insipho emnyama abayiswa ngesimo lapho ukhona, futhi kakade emakethe umane uthathe usayizi oyifunayo kumthengi.
Naphezu igama layo, umbala insipho kweqiniso akuyona abamnyama. Ngo umbala (futhi ukubukeka), kungcono kakhulu njenge amaswidi zaseMpumalanga. Umbala insipho akuyona eyohlobo, linezincazelo eziningi. Lokhu kubonisa ukuthi umkhiqizo ofanayo baye bakhiqiza ngokusho zokupheka ezihlukahlukene eliyingqayizivele. Ngaphezu kwalokho, ngamunye wabo e akhe khe sizakala! Futhi ngempumelelo. Ethandwa kakhulu insipho emnyama phakathi abantu inkinga isikhumba njengoba kukusiza balahle hhayi kuphela nezinduna, kodwa futhi ungakwazi ukuqeda ngokucasuka sombala izindawo, eczema. Lokhu brusochek imilingo ofanele ngisho labo isikhumba ebucayi kakhulu. Ngisho izingane letingabhukusha ngokusebenzisa le insipho, ngoba muhle kakhulu in ephulukisa ukuqubuka futhi yizindawo.
Kodwa hhayi kuphela Afrika ungenza insipho ezinhle. Ayikho ezingadumile kakhulu futhi umkhiqizo yasekhaya - insipho emnyama Agafia. Izibuyekezo ngakho, mangisho, liyathembisa kakhulu, kanye nengoma. Uma ukholelwa ukuthi yokugcina, sifaka uwoyela ngezitshalo eziyishumi (pine, * nomthidari, ulwandle lalesi sihlahla, umjunipha, rose asendle, burdock, yefilakisi nabanye), kanye isitshalo ezikhishwe eziningi infusions (melissa, lungwort, uchungechunge uDaisy, lungwort, Mallow, larch, licorice, bearberry, inadi, njll). Insipho emnyama kakhulu, etholakala amabhange ezinkulu futhi ukungaguquguquki jelly-like. Ngaphezu kwalokho, kuyinto ehluke ngokuphelele multi-functional, ngoba kungenziwa wageza, hhayi kuphela umzimba kodwa futhi izinwele ngisho ebusweni. Labo abaye bashiya Izibuyekezo kulesi simangalo umkhiqizo insipho Agafia cishe isimangaliso: isikhumba akusho ezomile, izinwele wayeka ziwa, dandruff ubalekela, ikhule ezimbotsheni kuthiwa ayisesemikhulu, futhi isikhumba nje iba ezithambile ngokumangalisayo silky. Ngaphezu kwalokho, sitsha siyisivumelwano ukonga kakhulu, kwanele lokho izinyanga ezimbalwa.
Botox izinwele Honma Tokyo: izibuyekezo abalungisa izinwele
Kuhle UV isibani
Lezi 3 Facts okunyanyisayo kuyokwenza ngenkani ukuba aphinde acabange maqondana nokususwa izinwele endaweni bikini